Cali Guudlaawe oo la kulmay Xildhibaannada Federaalka ku matala Gobolka Hiiraan | Banaadir Times
HomeUncategorisedCali Guudlaawe oo la kulmay Xildhibaannada Federaalka ku matala Gobolka Hiiraan
Cali Guudlaawe oo la kulmay Xildhibaannada Federaalka ku matala Gobolka Hiiraan
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Gudlaawe Xussen oo weli ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa wada kulamo siyaasadeed oo looga hadlayo xaalada dalka iyo Arrimaha ka taagan Gobolka Hiiraan.
Cali Guudlaawe ayaa xalay waxaa uu Muqdisho kulan la qaatay Qaar kamid Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee Deegaan Doorashadoodu tahay Hirshabeelle oo ku booqday halka uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho.
Kulankaan oo ahaa Salaan iyo Isxog wareysi Xildhibaanada Federaalka ee Deegaan Doorashadoodu tahay ugu tageen Madaxweynaha ayaa looga arinsanayay Arrimo dhowr ah.
Wararka kulanka aan ka helnay ayaa sheegaya in Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle iyo Xildhibaannada ay ka wada hadleen Arrimaha Gobolka Hiiraan iyo sidii xal looga gaari lahaa maadaama dadka ku nool Gobolka Hiiraan qaarkood ay kasoo horjeesteen doorashadii ka dhacday Jowhar iyo sidii ay si Nabadgelyo ah ugu dhici laheyd doorashada labada Aqal qeybta loo asteeyay Hiiraan.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa tan iyo markii lagu doortay Magaalada Jowhar waxaa kacdoon kala horyimid Jabhad laga Aas’aasay Magaalada Beledweyne, kuwaas oo dhowr jeer u diiday in uu tago halkaas.
Previous articleSheekh Shariif oo walaac ka muujiyay khilaafka kajira doorashooyinka
Next articleDFS oo beenisay Wararka sheegayay in Dhalinyaradii dibadda loo qaaday dagaal ku dhinteen